R.W UK oo laga helay Corona-virus. - NorSom News
R.W UK oo laga helay Corona-virus.
Ra’iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa laga helay xanuunka dunida kusii faafaya ee coronavirus, kaddib markii baaritaan lagu sameeyay. Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha UK ayaana shaacisay warkan.
Mr Johnson ayaa qaba calaamado sahlan oo ka mid ah kuwa uu leeyahay cudurka, wuxuuna si shakhsi ahaan ah isugu karantiilay gudaha xafiiskiisa.
“Waxaa laga baaray coronavirus kaddib markii uu si gaar ah ula taliyay madaxa waaxda caafimaadka, Chris Whitty,2 ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
FG: Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix, kadibna Subcribe saar(Abonner).
Boris Johson wali wuxuu sii heyn doonaa xilka iyo maamulka dowladda, xilli lala tacaalayo xasaradaha ka dhashay cudurkan, sida lagu sheegay bayaanka.
Bartiisa Twitter-ka ayuu Mr Johnson ku yiri: “24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaan isku arkay calaamado aan xoog badneyn waxaana iska baaray coronavirus. Hadda waan is karantiilay, laakiin waan sii wadi doonaan inaan dowladda ku hoggaamiyo dagaalka ay kula jirto fayraskan, anigoo shirarka uga qeyb qaadan doona muuqaal ahaan.
“Annagoo wadajir ah waan ka adkaan doonnaa arrintan.”
Markii ugu dambeysay ee Mr Johnson la arkay waxay ahay habeenimadii Khamiista, xilli uu ka qeyb qaadanayay munaasabad loogu mahadcelinayay shaqaalaha Waaxda Qaran ee Caafimaadka UK (NHS).
Waxaa jira in ka badan 11,600 oo qof oo la xaqiijiyay inuu coronavirus kula dhacay UK, halka 578 ruuxna ay u geeriyoodeen.
Previous articleBooliska Oslo: Dad badan oo soomaali ah ayuu Corona-virus ku dhacay, qaarna isbitaal ayay u jiifaan.
Next article(Daawo)-Booliska Oslo: Waxaan wel-wel ka qabnaa tiradaa soomaalida ee Oslo qaaday Corona-virus.